ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီး၊ ဂရိနိုင်ငံရှိအလှအပ | Absolut ခရီးသွားခြင်း
အလှအပသည်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။ ယနေ့လှပသောအရာသည်ယခင်ကမလှခဲ့၊ ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းလှပသောအရာသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသောအမြင်နှင့်များစွာကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်အလှ၏အထွေထွေပုံစံများကိုရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးများသည်အလှအပနှင့်ထိုက်တန်သောအရာအားဖြင့်အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်ထားသည်မှာမှန်ပါသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အလှတရားကိုမွေးဖွားခဲ့သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှတရား၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သော Classical Greece ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အလှအပတို့၏တည်မြဲသောစံနှုန်းများကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
ဤသည်အကျယ်အားဖြင့်ပြောရလျှင်, ဂရိ၏သမိုင်းအတွက်ကာလ၏အမည်ဖြစ်ပါတယ် ဘီစီ XNUMX နှင့် XNUMX ရာစုအကြား။ မှ C. ၎င်းသည်ဂရိယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏တောက်ပသောနေ့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒီပန်းချီကားရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဒီပန်းချီကားရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုချထားတာပါ။
ဂရိလူမျိုးများကကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးလှပလျှင်၎င်းသည်လှပသောအတွင်းပိုင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အရည်အသွေးနှစ်ခုလုံးအတွက်စကားလုံးသည်တူညီသောဒင်္ဂါး၏နှစ်ဖက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည် kaloskagathos: အတွင်းပိုင်းအပေါ်လှပနှင့်ပြင်ပမှာလှပသော။ အထူးသဖြင့်သူဟာလူငယ်တစ်ယောက်ပါ။
လှပသောလူငယ်တစ် ဦး အားသူ၏အလှအပ၊ ဉာဏ်ရည်နှင့်နတ်ဘုရားများချစ်မြတ်နိုးမှုတို့ကြောင့်သုံးကြိမ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသည်ဟူသောအတွေးကိုပန်းပုလက်ရာများဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကဤကာလ၏ပန်းပုများသည်ထိုအတွေး၊ စိတ်ကူးယဉ်၊ အလိုဆန္ဒကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုယူမှတ်ခဲ့ကြသော်လည်းအမှန်တရားမှာမှိုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့အချိန်တွင် ဘီစီ ၅ ရာစုမှ ၃ ရာစုအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သောလှပသောပန်းပုရုပ်များသည်စစ်မှန်သောလူများအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
အမျိုးသားတစ် ဦး သည်အင်္ဂတေနှင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မှိုကိုပန်းပုပုံဖော်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဂရိလူမျိုးတွေ၊ ငါတို့ပြောကြတယ် အမျိုးသားများသည်အားကစားခန်းမ၌အချိန်ကြာမြင့်စွာနေခဲ့ရသည် (အကယ်၍ သူတို့သည်ချမ်းသာပြီးလွတ်လပ်သောအချိန်ရှိခဲ့လျှင်) ။ ပျမ်းမျှအေသင်မြို့သား (သို့) Spartan နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ Versace မော်ဒယ်လ်အဖြစ်ထုထည်ထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ခါးကျဉ်း၊ ကျော၊ လိင်တံငယ်နှင့်အဆီပြန်သောအသားအရေ ...
ယောက်ျားမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့် ဂရိအလှအပရဲ့စံပြအမျိုးသမီးကဘာလဲ? ကောင်းပြီ၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အလှတရားဟာကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်မိန်းမတစ်ယောက်မှာဆိုးတာပဲ။ လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ပြwithနာနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခဲ့သည်။ Kalon kakon, လှပသောနှင့်မကောင်းတဲ့အရာ, ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ဘူး။ မိန်းမသည်လှသောကြောင့်အဆင်းလှ၏။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏လိုင်း။
ထိုသို့လည်းပုံရသည် အလှအပဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောပြိုင်ဆိုင်မှု ခေါ်အလှအပအလှမယ်ရှိခဲ့သည် kallisteiaထိုအဖြစ်အပျက်များသည် Lesbos နှင့် Tenedos ကျွန်းများပေါ်တွင်မိန်းကလေးများတရားစီရင်ခြင်းခံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Aphrodite Kallipugos နှင့်သူမ၏လှပသောတင်ပါး၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ပြိုင်ပွဲရှိခဲ့သည်။ သူမသည်စစ္စလီကျွန်းတွင်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်နေရာရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်လယ်သမားနှစ် ဦး ၏သမီးနှစ်ယောက်၏နောက်ဆုံးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ အနိုင်ရသူမှာသူမတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြည်းရှိသောကြောင့်ဘုရားကျောင်းကိုဆောက်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကို Classical ဂရိတွင်လှလှပပဟုခေါ်သည်။ ပန်းချီကားများနှင့်ပန်းပုများအရရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးများသည်လှပသောကိုယ်ခန္ဓာဟုယူဆရသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အကျဉ်းချုံးစာရင်းပြုစုနိုင်သည်။ ပါးပါးပန်းရောင်ဖြစ်သင့်သည် (အတုသို့မဟုတ်သဘာဝအရ) ဆံပင်ကိုမုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိပ်၌သပ်သပ်ရပ်ရပ်စီစဉ်ထားရမည်။ အသားအရေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်သည် y မျက်လုံးသည်မျက်ခုံးရှိရမည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပြီးပြည့်စုံသောခန္ဓာကိုယ်သည်ဖြစ်သင့်သည် ကျယ်ပြန့်တင်ပါးနှင့်အဖြူရောင်လက်နက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအမှုန့်နှင့်အတူအရောင်ချွတ်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည် redhead ခဲ့လျှင်, ဂုဏ်ပြုလွှာ။ အလယ်ခေတ်တွင်အနီရောင်နီများသည်စုန်းကဝေအတတ်နှင့်ထူးဆန်းသောအရာများကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သော်လည်းဂန္ထဝင်ဂရိတွင်သူတို့ကိုကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ဆံပင်ရွှေရောင်? သူတို့မှာမကောင်းတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူး။ တိုတိုပြောရရင်နတ်ဘုရားမ Troy မှ Aphrodite သို့မဟုတ် Helen သည်အလှတရား၏စံနမူနာဖြစ်သည်။
တင်ပါးနှင့်အသားဖြူတို့၏ကျယ်ပြန့်သောအယူအဆကိုရာစုနှစ်များစွာကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ အားကောင်းသောခန္ဓာကိုယ်သည်ကောင်းမွန်သောအာဟာရနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားဖြူသည်ကျွန်ဖြစ်ခြင်း၊ အိမ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအိမ်တွင်းလုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ထပ်တည်းကျသည်။
သို့သော်ထို့နောက်ယနေ့ကဲ့သို့ပင်လှပပြီးစုံလင်သောကိုယ်ခန္ဓာရှိခြင်းသည်ယဇ်တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အနည်းငယ်သောမှော် Wand အားဖြင့်ထိမိမွေးဖွားကြသည်။ အရေပြားကိုအဖြူရောင်ဖြစ်စေပြီးဖြူဖွေးဖြူစင်စေလိုသောကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ရှေးဟောင်းအလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးသောမှတ်ချက်တစ်ခုမှာ ထိုအချိန်မှစ၍ ဖြစ်သည်။ ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင် Theofastus de Eresos သည်သူတို့မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုဖော်ပြရာတွင်ထိုသို့ပြုသည် ခဲ -based မုန့်သို့မဟုတ်ဖယောင်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့ခဲနှင့်ဖြစ်ခဲ့သည် အဆိပ်။
၏အသုံးပြုမှုကို ဆောက်တည်ပုံ အရာအားလုံးသည်အလှအပကိုအသုံးချနိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်အထက်တန်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့ခဲ့သော်လည်းစတိုင်များစွာရှိသည်။ ပြည့်တန်ဆာများတွင်သူတို့၏မိသားစုနှင့်ကောင်းမွန်သောမိသားစုရှိအမျိုးသမီးများရှိသည်။ ယခင်ကဝန်အပြည့်အဝရဆုံးမျက်လုံးများ၊ တောက်ပသောနှုတ်ခမ်းများ၊ ဆိုးဆေးဆံပင်များနှင့်ရဲရင့်သောအ ၀ တ်အထည်များကိုသုံးခဲ့ခြင်းကြောင့်မိန်းမနှင့်မည်သို့ခွဲခြားသိမြင်ခဲ့ရသည်ကိုကြည့်ဖို့လုံလောက်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း။
ဘာလဲ ဆံပင်ပုံစံ ဂရိနိုင်ငံတွင် ရှေးခေတ်ဂရိအမျိုးသမီးများမှဆံပင်ပုံစံပုံဖော်ခြင်းသည်၎င်းတို့နှင့်အတူပြသခဲ့သည် ကျိုင်းတုံများစွာသောနှင့်သေးငယ်တဲ့။ ဥပမာ၊ အိုးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းတို့ဒီစတိုင်ကိုတွေ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှဖက်ရှင်အသွင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။
၅ ရာစုတဝိုက်တွင်သူတို့၏ဆံပင်များကိုဝတ်ဆင်မည့်အစား၎င်းသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတွင်ချည်ထားသောကြိုးကိုစတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပုံရသည် impeller။ သူတို့လည်းသုံးတယ် အဆင်တန်ဆာများနှင့်အလှဆင် ထိုကဲ့သို့သောလက်ဝတ်ရတနာသို့မဟုတ်မိသားစုစည်းစိမ်ကိုပြသနိုင်ဖို့တစ်ခုခုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသော။ သူက ဆံပင်တို? ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကပြောရမယ် ဝမ်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း.
ဟုတ်ပါတယ်၊ အလင်းဆံပင်သည်မှောင်မိုက်ထက် ပို၍ အဖိုးတန်သည်။ ဒါကြောင့်နေနဲ့ပေါင်းပြီးရှင်းလင်းဖို့ရှလကာရည်ဒါမှမဟုတ်သံပုရာဖျော်ရည်ကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ကဆံပင်ကောက်ကောက်ချင်ရင်သူတို့ကိုလုပ်ပြီးသူတို့ဆံပင်ကိုကြာရှည်ခံအောင်ပျားဖယောင်းနဲ့စိမ်လိုက်တယ်။ အဘယ်သို့သောအကြောင်း ကိုယ်ခန္ဓာဆံပင်? အမျိုးသမီးများကဲ့သို့အမွေးထူသောဂရိအမျိုးသမီးများသည် ၂၀ ရာစုအထိအမြဲတမ်းရှိခဲ့ပါသလား။
ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းသည်သာမန်ကိစ္စဖြစ်သည် တကယ်တော့ဂရိတွေကြားမှာသာမကတခြားယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပါပါ။ ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီအမြောက်အများရှိသော်လည်းထိုအချိန်က Classical ဂရိတွင်ဆံပင်မရှိခြင်းသည်ဖက်ရှင်ဆန်နေသည်။ လူထုဆံပင်ကိုမီးတောက်နှင့်သို့မဟုတ်သင်တုန်းဖြင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ယနေ့အချိန်တွင်ခရီးသွားခဲ့လျှင်၊ သင့်ရဲ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားစားပွဲပေါ်မှာအဘယျသို့ထုတ်ကုန်များပျောက်ဆုံးနေနိုင်သနည်းသံလွင်ဆီအရေပြားခြောက်သွေ့ရန်အတွက်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သိုမဟုတ်ဆံပင်အတွက်အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်စေသောကြောင့်မွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ရောနှောပါက၊ miel အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင်ပျားဖယောင်းနှင့်နှင်းဆီရေနှင့်ရောနှောထားသောရေမွှေးများနှင့်ဆီမွှေးများနှင့်အလွန်မွှေးသောပန်းများပါ ၀ င်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော \_ t ကျောက်မီးသွေး မျက်လုံးများ၊ မျက်တောင်များ၊ မျက်ခုံးများနှင့်အခြားသတ္တုဓာတ်များအတွက်မြေပြင်ပေါ်တွင်အရိပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊
အချက်တစ်ချက် မျက်ခုံးတစ်ခုတည်း ၎င်းကိုမီးသွေးဖြင့်ဆေးကြောခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အကယ်၍ မလုံလောက်ပါကတိရစ္ဆာန်ဆံပင်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်အစေးဖြင့်ကပ်ထားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းရရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့မှန် Classical ဂရိနိုင်ငံတွင်အနုပညာရှင်များသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကိုယ်ခန္ဓာအလှအပဆိုင်ရာအယူအဆကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် ၏စိတ်ကူးကိုတီထွင် "စံပြခန္ဓာကိုယ်။ " လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်သူတို့အတွက်အာရုံခံခံစားမှုခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသမှုကိုဖော်ပြသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂရိလူမျိုးများအနေဖြင့်စုံလင်ခြင်းအားသဘာဝ၌မရှိကြောင်း၊ ၎င်းကိုအနုပညာကထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒီတော့အဲဒီအတွေးရှိတယ် ပန်းပုရုပ်သည်စင်ကြယ်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာဂရိပန်းပုဆရာများသည်တကယ့်မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်းအမှန်မှာမှန်ပါသည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲအများအပြားဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လက်တစ်ဖက်၏လက်သည်အခြားတစ်ခု၏ခေါင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုအချိန်ကလူငယ်တစ် ဦး အားသူသည်ပန်းပုရုပ်နှင့်တူသည်ဟုပြောပြရန်ကောင်းသည်။
အကယ်၍ Aphrodite သည်beautyတ္ထိအလှ၏စံနမူနာဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ Heracles သည်ပြီးပြည့်စုံသောယောက်ျားကိုယ်ခန္ဓာ၏စံပြဖြစ်သည်။ အားကစားသမား၊ စူပါလူသား၊ လိင်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏ကိုယ်စားပြုမှု။ တက်တူးတွေနဲ့ယနေ့လိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်အနုပညာ ပြီးတော့အလေးမခြင်း၊ တခြားသူများ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ငါ့ကိုယ်ကိုလည်းကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ဂရိအနုပညာသည်အမျိုးသားပုံစံကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည် femတ္ထိထက် ပိုမို၍ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအနုပညာသည်အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများအပေါ်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပြောင်းပြန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းမည်သို့ရောက်ရှိနေကြောင်းသိလိုသည်။ အလယ်ခေတ်၊ Renaissance သို့မဟုတ် Baroque ပုံစံများကိုစဉ်းစားကြပါစို့။
ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအနေဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အလှအပဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများသည်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ Nefertiti မှ Aphrodite မှ Rubens အမျိုးသမီးများ၊ Marilyn Monroe၊ '၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏ supermodels နှင့် ၂၁ ရာစု၏ကျော်ကြားမှုများမှပလတ်စတစ်ထိတွေ့မှုများဖြင့်အမျိုးသမီးများအထိကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏စံပြအဖြစ်ကိုဆက်လက်စဉ်းစားနေကြသည်။ ကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့ထက်အခြားအဘို့ပိုပြီး။
ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ နောက်တစ်ခါပြတိုက်ကိုသွားပြီးဂန္ထဝင်ပန်းပုတွေကိုတွေ့ရင်အဲဒီအလောင်းတွေနဲ့သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အနီးကပ်ကိုကြည့်ပါ။ မေးခွန်းကသဘာ ၀ ကကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းထားသည့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်လက်ခံမည်နည်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာ၊ Classical ဂရိရှိအလှအပ
Chios မှဇာတိအဆိုပါ mastic ဗဓေလသစ်